मोनोरेल भन्दा मेट्रोरेल नै उपयुक्त हुन्छ
आशिष गजुरेल, यातायात तथा ट्राफिक इन्जिनीयर
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक जाम व्यवस्थित गर्न ‘मास ट्रान्जिट’मा जाने योजना बनाएको छ । यसका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाले संयुक्त रूपमा चक्रपथमा आगामी ३ वर्षभित्र मोनोरेल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यस्तै, रेल विभागले बूढानीलकण्ठ–लगनखेल हुँदै कीर्तिपुरसम्म र लगानी बोर्डले नागढुंगा–धुलिखेल सडक खण्डमा मेट्रोरेल सञ्चालनको कार्ययोजना बनाइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा मोनोरेल र मेट्रोरेलको विषयमा यातायात तथा ट्राफिक इन्जिनीयर आशिष गजुरेलसँग गरिएको कुराकानीको सार :
मोनोरेल र मेट्रोरेलमा के फरक छ ?
जनसंख्या अत्यधिक भएको शहरमा ‘मास ट्रान्जिट’को रूपमा मेट्रोरेल र मोनोरेल सञ्चालन गरिन्छ । यी दुवैले एकैपटकमा धेरै यात्रु बोक्न सक्छन् । एउटा लिकमा गुड्ने सानो आकारको रेल मोनो तथा दुईओटा लिकमा गुड्ने अलि ठूलो आकारको रेल मेट्रोरेल हो । मेट्रोरेल मोनोभन्दा बढी यात्रु बोक्न सक्ने क्षमताको हुन्छ ।
मोनोरेल र मेट्रोरेल सञ्चालन कसरी हुन्छ ?
जमीनमाथि उठेको संरचना निर्माण गरेर मोनोरेल सञ्चालन गरिन्छ । जमीनमुनि सुरुङ बनाएर वा माथि उठेकै संरचनामा पनि मेट्रोरेल चलाउन सकिन्छ ।
नेपालका लागि कुन उपयुक्त छ ?
म मोनोरेल बनाउँनै हुँदैन भन्छु । मोनोरेलको क्षमता कम हुन्छ र यो दीर्घकालीन रूपमा मेट्रोरेलभन्दा महँगो पनि हुन्छ । एउटा मोनोरेल बनाउन करीब रू. ६ अर्ब र मेट्रोरेल बनाउन करीब रू. १० अर्ब लागत लाग्छ ।
मेट्रोरेलले ६० हजारदेखि ८० हजारसम्म यात्रु बोक्न सक्छ भने मोनोरेलमा ८ हजारदेखि १० हजारसम्म मात्र यात्रु बोक्ने क्षमता हुन्छ । ६ ओटा मोनोरेल बराबर एउटा मेट्रोरेल हुन्छ । बढी यात्रु बोक्न सक्ने र सञ्चालनमा पनि सस्तो हुने भएकाले मेट्रोरेल उपयुक्त हुन्छ ।
अन्तरराष्ट्रियस्तरमा कुन बढी सफल छ ?
बाहिरी देशमा पनि मेट्रोरेल सफल भएको छ । विश्वभर सबैभन्दा लामो मोनोरेलको रूपमा जापानमा ३० किलोमिटर लामो मोनोरेल सञ्चालनमा छ ।
मलेशियामा ८ किलोमिटरमा रहेको मोनोरेल राम्रो अवस्थामा चलिरहेको छ । अन्य कतिपय देशमा मोनोरेल असफल भएर बन्द भइसकेका छन् । केही समयअघि सिड्नीमा पनि मोनोरेल बन्द भयो । मुम्बईमा सञ्चालन भइरहेको मोनोरेल बन्द हुने अवस्थामा छ । सबैभन्दा बढी मोनोरेल जापानमा भएकोमा जापानले पनि मोनोरेलको लगानी घटाएर मेट्रोरेलमा लगानी बढाएको छ ।
मोनोरेल कस्तो ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ ? काठमाडौंमा सुरुङ बनाएर मेट्रोरेल सञ्चालन गर्न सम्भव छ ?
विमानस्थल, पार्क लगायत साना ठाउँमा मोनोरेल उपुक्त हुन्छ । मेट्रोरेलमा नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास भएकाले काठमाडौंमा यसको सञ्चालन सम्भव छ ।
काठमाडौंमा सञ्चालन गर्ने भनिएको मोनोरेल गलत हो ?
मेट्रोरेलभन्दा सुधारिएको बस सेवा राम्रो हुन्छ । यातायात व्यवस्थापनका लागि यस्ता योजनामा जाने हो भने मेट्रोरेल नै बनाउनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा मोनोरेल असफल भइसकेकाले यसलाई नेपालमा बनाउनु नै हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । मेट्रोरेल बनाउन समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि सुधारिएको बस सेवा शुरू गर्नुपर्छ ।